Bit By Bit - Intshayelelo - 1.5 Inkcazo ncwadi
Le ncwadi ibiququzelwe yokuqhubela phambili ngokusebenzisa ezine iindlela ebanzi yophando: ngokubukela ukuziphatha, ngokubuza imibuzo, imifuniselo aphilileyo, kunye nokudala intsebenziswano ubunzima. Lamacebo ezine zazisetyenziselwa kwezinye uhlobo engama-50 eyadlulayo, yaye mna Ndiqinisekile ukuba bonke baya kusetyenziswa kwezinye uhlobo engama-50 ukusuka ngoku. Ndiye abazahluleleyo isahluko ukuba indlela nganye. Uninzi izahluko icandelo enikelwe ezimbalini ngakumbi, kukho isihlomelo yobugcisa okanye imbali, imisebenzi ezinokusetyenziswa eklasini okanye self-isifundo. Ngenxa yezi mpawu, ndiza ukugcina isicatshulwa ngolu elula kangangoko kunokwenzeka; sikuncede kwamanye ezi iindawo izahluko ukuba ufuna iinkcukacha ezingaphezulu kunye ucaphulo kungena uncwadi.
Kwisahluko 2 (ukuziphatha Ukuqwalasela), ndiya ukuchaza into nendlela abaphandi banokufunda kwindlela yokuziphatha abantu. Ingakumbi, Ndiza kugxininisa data wokulanda digital data zolawulo apho Umphandi kungekho indima ukudalwa data. Ndiza ukuchaza iimpawu eziqhelekileyo olu hlobo data, yaye ndiza ukucacisa ezinye izicwangciso uphando ezinokusetyenziswa ukuze bafunde ngempumelelo awayewaphatha eziboniweyo.
Kwisahluko 3 (Ukubuza imibuzo), ndiya kuqala ngokubonakalisa oko abaphandi banokufunda ngokushukumisa ngaphaya ngokubukela ukuziphatha kwaye uqale ukuthetha nabantu. Ingakumbi, ndiya kuxoxa ukuba kukho ixabiso elikhulu ekwenzeni uphando uhlolisiso, nokuba kwihlabathi swii data sele ekhoyo yesuntswana. Ndiya ngokutsha sikhokelo imposiso uphando zemveli zizonke kwaye usebenzise ukuba alungiselele iziganeko ubudala yedijithali yenza uphando uphando. Ingakumbi, ndiza kukubonisa indlela ubudala yedijithali kusenokukhokelela kwiinguqu ezinkulu kweesampula iindlebe. Okokugqibela, ndiza ukuchaza izicwangciso ezimbini yokudibanisa data zophando kunye data wokulanda yesuntswana. Nangona lithemba ukuba abanye abaphandi uphando uziva ngoku, mna silindele ukuba ubudala lwamasuntswana kuba thuba libalulekileyo lophando phando.
Kwisahluko 4 (Ubaleko imifuniselo), ndiya kuqala ngokubonakalisa oko abaphandi banokufunda xa sisiya phesheya ngokubukela zokuziphatha ngokubuza imibuzo phando. Ingakumbi, ndiza kukubonisa indlela olungenamkhethe olulawulwayo imifuniselo-apho umphandi iyangenelela zelimiweyo esithile kakhulu indlela-ukuba abaphandi ukuba bafunde ubudlelwane woko. Ndiya thelekisa iintlobo experimenti ukuba siya kwenza ntoni kwimeko elidlulileyo kunye iintlobo esinokuzenza ngoku. Ngako oko imvelaphi, ndiza ukuchaza urhwebo-offs inxaxheba zicwangciso ezimbini eziphambili sokuqhuba ii- yesuntswana. Okokugqibela, Ndiza kwenza ezinye ingcebiso kuyilo ngendlela Ungathatha ingqalelo amandla okwenene imifuniselo yedijithali uchaze ezinye uxanduva oluza ukuba amandla.
Kwisahluko 5 (Ukudala intsebenziswano ubunzima), ndiza kukubonisa indlela abaphandi ungenza ubunzima intsebenziswano-ezifana crowdsourcing nommi nenzululwazi-ukuze ukwenza uphando lwentlalo. Ngokuyichaza iiprojekthi ubunzima intsebenziswano eyimpumelelo ngokubonelela siseko engundoqo embalwa, ndiyathemba kuni ondohlwayayo ngezinto ezimbini: kuqala, ukuba intsebenziswano ubunzima linokusetyenziswa uphando lwentlalo, yaye okwesibini, ukuba abaphandi abasebenzisa ubunzima intsebenziswano iya kuba nako ukusombulula iingxaki ngaphambili ngathi akunakwenzeka. Nangona intsebenziswano ubunzima kudla ngokukhuthazwa njengendlela ukugcina imali, oko okuninzi kunoko. intsebenziswano Mass nto nje ukuvumela ukuba senze uphando zitshiphu; luvumela ukuba senze uphando ngcono.
Kwisahluko 6 (Ethics), ndiya kuxoxa ukuba abaphandi ukwandisa amandla ngokukhawuleza phezu nxaxheba, nokuba ezi zakhono zi ukutshintsha ngokukhawuleza izithethe zethu, imithetho, kunye nemithetho. Le amandla indibanisela-ukwanda kunye nokunqongophala kwisivumelwano malunga nendlela ukuba amandla kufuneka isetyenziswe-amagqabi kakuhle intsingiselo abaphandi kwimeko enzima. Ukuze kulungiswe le ngxaki, ndiya kuxoxa ukuba abaphandi kufuneka basebenzise imigaqo-based approach. Oko kukuthi, abaphandi kufuneka ukuba nazo zizivandlakanye uphando lwabo ngokusebenzisa imigaqo-nto leyo esele ndiya kuthabatha njengoko kunikwa-kwaye esebenzisa imigaqo yokuziphatha jikelele. Ndiza ukundulula siseko amane lusekiwe kwaye izikhokelo ezimbini esisemgangathweni enokunceda ukukhokela izigqibo zakho. Okokugqibela, ndiza ukuchaza nokuhlalutya ezinye iingxaki zokuziphatha ezithile ukuba ndilindele ukuba uya kundikhawulela abaphandi kwixesha elizayo, yaye ndiza kunikela amacebiso aluncedo abasebenza kwindawo kunye zokuziphatha kushukuma.
Okokugqibela, kwisahluko 7 (Ikamva), ndiya zishwankathela imixholo ezintathu ziphinde liphela izahluko kwaye kuya kubaluleka kakhulu kwixesha elizayo.
uphando loLuntu kweminyaka lwamasuntswana ukudibanisa into endiyenzileyo ngaphambili kunye zizakhono ezahlukeneyo kakhulu kwikamva. Ngoko ke, uphando loluntu azinanto omabini ntle kunye izazinzulu data. iqela ngalinye linento ukuba negalelo, yaye iqela ngalinye linento ukufunda.